မီတာနှင့်အနိမ့်မှအလတ်စားထဲမှာပါတဲ့ 2- အစိတ်အပိုင်းထုတ်ကုန်ရောစပ်
by မြစ်ဝကျွန်းပေါ်အင်ဂျင်နီယာ / အင်္ဂါနေ့, 20 ဇန်နဝါရီ 2015 / Published in ပြည်တွင်းသတင်း 2- အစိတ်အပိုင်းများစနစ်များ
ကျနော်တို့အတွက် DMC202 system ကိုအင်ဂျင်နီယာ ဆေးရောနှောခြင်းနှင့်လျှောက်လွှာ အလယ်အလတ်မှအနိမ့် ထဲမှာပါတဲ့ 2- အစိတ်အပိုင်းအရည်, ကဲ့သို့ epoxies, polyurethanes, silicon, etc
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိရိယာတစ်ခုလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ modular Siemens software ဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသော PLC နှင့် touchscreen ပါသောထိန်းချုပ်ယူနစ်မှတစ်ဆင့်ထိန်းချုပ်သည်။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲနဲ့အတူစက်ဟာမီတာ (၅) ခုအထိထုတ်ကုန်များကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
DMC202 သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များ၊ ထုတ်ကုန်နှင့်အသုံးချမှုနှင့်အညီချိန်ညှိနိုင်သည့် modular စနစ်ဖြစ်သည်။ Layout တော်တော်များများဟာ manual နဲ့ automatic applications တွေအတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်။
ငါတို့အတွက်အထူး DMC202 သောက်သည့်စက်၏အထူးပုံစံကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ခဲ့သည် potting လျှောက်လွှာများ။ ဒီ installation ကိုတစ် ဦး တပ်ဆင်ထားသည် စားပှဲ နှင့် ခြေမနင်းဒါကြောင့်ရန်လွယ်ကူသည် တိကျစွာ & အကြိမ်ကြိမ်ဖြည့်ပါ မကြာခဏ သေးငယ်တဲ့လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ.
သင်သည်သင်၏ဖောက်သည်များရရှိရန်သေချာပါသည် အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန် အလွန်သောကြောင့် တိကျသောဆေးထိုး.
သငျသညျတစ် ဦး နှင့်အတူထုတ်ကုန်ရ တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းပြီးသွား.
သငျသညျ operating အချိန်အနိုင်ရ လွယ်ကူသောထိန်းချုပ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
သင်၏အော်ပရေတာများသည်အချိန်နှင့်ရရှိသည် Self- ထောက်ခံမှု touchscreen ဖြင့်လွယ်ကူသောညှိနှိုင်းမှုကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။
သငျသညျ လျှော့ချ အ အချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ် of ကျချိန် တပ်ဆင်မှုလွယ်ကူစွာပြုပြင်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
သငျသညျ ကိုရှောင်ကြဉ် အန္တရာယ် ဓာတုသဟဇာတ သံမဏိဖိအားရေယာဉ်များကိုအသုံးပြု။ ။
silicone အရေပြားပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများထုတ်လုပ်ရန်အတွက် silicone သောက်ခြင်း။
polyurethane ၏တံခါးကို cornices များအတွက်ပွင့်လင်းမှိုသို့ဆေးထိုး။
ရေစစ်စက်များအတွက်ပလပ်စတစ်ဘောင်ပေါ်တွင်အမြှေးပါးကိုပူးကပ်ရန် polyurethane ကိုအသုံးပြုခြင်း။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကိုဆန့်ကျင်ပိုမိုမြင့်မားခုခံများအတွက်လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများကို potting ။
မှိုသို့ silicones နိမ့်ဖိအားထိုး။